जीवनशैली::Nepalese News Portal
हालै इन्टरनेटमा भाइरल यी युवती को हुन् ? नझुक्किनुहोला हेर्दा नेपाली जस्तै लाग्ने यी युवती नेपाली भने होइनन् । हाल इन्टरनेटमा भाइरल भएकी यी युवती को हुन् त त्यसोभए ? सबैको मनमा खुल्दुली आउन...
सेक्सका बारेमा महिलाले राख्ने अचम्मका १० चाहनाहरू
महिलाहरू जीवनमा केही न केही फरक खालको सेक्स अनुभव गर्न चाहने एक अध्ययनले देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो–अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले...
श्रीमानलाई खुशी बनाउन चाहानुहुन्छ ? (यस्ता छन् टिप्स)
प्रेम जति नै गहिरो किन नहोस् कुनै पनि जोडी हरबखत प्रेममा डुबेर बस्दैनन् । उनीहरुलाई आफ्नो जिम्मवारी पनि निभाउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । जिन्दगीको उतारचढाव सहनुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा...
हस्तमैथुन गर्न बढी रुचाउने केटा कि केटी ? हेर्नुस् यस्तो छ सर्वेक्षण !
हस्तमैथुन किशोरावस्थामा हुने आम यौन व्यवहार हो । यद्धपी कतिपयमा यो व्यवहार पाको उमेरसम्म रहने गर्दछ । आफ्नो यौन उत्तेजना शान्त पार्ने सशक्त, सुरक्षीत र गतिलो माध्यम भएकोले अधिकांश महिला तथा पुरुषले यो व्यवहार...